Ukuphindaphindeka kwe-GIS, enye into engakumbi enezakhiwo- iGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2012 GIS asibonise
Ngethuba elidlulileyo Ndathetha kwinqaku Indlela yokuboniswa ngayo idalwe ukuprinta usebenzisa GIS asibonise. Ngelo xesha senza ubeko olusisiseko, kule meko ndifuna ukubonisa eyinkimbinkimbi. Lo ngumzekelo wemephu yemveliso yolimo; njengoko eyona mephu iphambili kukusetyenziswa komfanekiso wesatellite, emazantsi yimephu yesimo sezolimo kwimephu yeSimmons kunye nokusetyenziswa okunokubakho kweFAO.
Okokuqala, kubalulekile ukuqonda isakhiwo sezinto ezisebenzisayo, njengoko ndachaza kuyo nqaku yangaphambili, ekubeni ezo zinto ezifanayo zilayishwe kwisakhiwo ngokwempahla.
Lo ngumgca wecala, engacacanga kuManinzi, inokuqulatha iimilo ezixubeneyo, imigca okanye amanqaku, kuba zonke ziqulathwe kwindawo yogcino lwedatha. Lo mzobo unokuba nabantwana, ezinye izinto ezinje ngala:
Itafile, engumboniso wetafile yomaleko. Oku kwahlukile ngokuzoba.
Iilebheli, eziziilebhile ezinamandla zentsimi eboniswe kwimephu. Unokwenza iilebhile ezininzi njengoko ufuna, zilungiselelwe kumzobo kwaye zinokungangqinelani.
Imixholo, khange ndithethe malunga noku ngaphambili, kodwa yimixholo emiselweyo yolwaleko, zinokubaninzi kwaye zikwindawo yemephu.
Yinto yokuqulunqwa kweziqendu. Oku kuxhotywe ngemixholo eyahlukeneyo, iilebheli, iiraster. Banokuba yimizobo ngokuthe ngqo kodwa ayikhuthazwa into yokuba baya kutshintsha njengoko bepeyintiwe ngomxholo owahlukileyo, kuba kukhethwa ukubiza imixholo. Ukhetha into ephezulu, yintoni ebonakalayo, yeyiphi imibala yomxholo, umgca, ubukhulu, i-weft ... ukuthanda kwethu.
Jonga umzekelo kumfanekiso ongaphambili. Le yindlela eyenziwe ngayo yimephu yeenyawo oyibonayo kwimephu yokuqala. Ibonisa indlela iilebheli, itafile kunye nomxholo wemephu yokusetyenziswa komhlaba ye-FAO eyakhiwe ngayo, kwaye ezi zilayishwe kwimephu yohlobo lokubonisa.
ngumboniso wokuprinta kwaye ufakwa emephini Unokuba nokuninzi njengoko kufuneka, kwaye unokuzimela.
Ukuba kuyimbonakalo yokuma, amaqhosha alandelayo omxholo anikezelwe, ngokufanayo nakwenziweyo ngeArcmap, eyokuqala yeyokulungelelanisa kunye nokubekwa kweebhokisi zetekisi. Emva koko kukho ukhetho lokwenza imigca ethe tyaba, imigca emi nkqo, ibhokisi, ibhokisi ukusuka kwindawo esembindini, isicatshulwa, ilivo, uphawu lwangasemantla, kunye nesikali sebar. Ayiboniswanga kwi-bar kodwa kukho nemiyalelo yokulungelelanisa kunye nokusabalalisa. Zilayishwe nge Izixhobo> yenza ngokwezifiso> ulungelelwaniso.
Lo mzekelo ulandelayo ubonakalisa imeko yentsomi, inokulayishwa ngokwahlukeneyo okanye ngaphakathi kwigama ledatha. Ukongeza, ndongeze umgca wokuhlula ngokuthe tyaba, kodwa imigca ethe nkqo inokongezwa ukuze iimbali zenziwe kububanzi.
Ke nangona i-Manifold ingazisi ngaphezulu kwetemplate ehlwempuzekileyo, owona msebenzi mkhulu kukudibanisa iimephu, emva koko bazitsalele kwiphepha kwaye zilungelelanise ukungcamla. Kwipropathi (ngonqakrazo kabini) unokukhetha ukuba sifuna ukuba negridi kulolongo, ukuba sifuna ukuba lulungelelwaniso lwejografi okanye uqikelelo lwe-UTM. Isikali, iisimboli kunye nenyakatho.
Ukongezelela unako ukulayisha imifanekiso njengoko ndiyenzile ngekhusi lekhonkco kwaye Iifayile ze-Excel ezixhunyiwe njengoko ndenze ngebhokisi eluhlaza okwesibhakabhaka ngasezantsi.
Ngoko ke, ngokukodwa, iphrojekthi iphinde ixhase iindlela ezininzi, ezixhotywe ngeemephu, ezi zinto ngokuzibandakanya kunye nokuxhaswa kwazo zibonakaliso zetyala levector.
Kwakhona iibhokisi zombhalo zinokubakho i-macros, njengoko kuboniswe kumfanekiso olandelayo, apho igama loKwakha, inkcazo, umhla okanye iphrojekthi kuququzelela ukubekwa.
Kwaye, ngokuqinisekileyo ukuba imephu eyenziwe ingenziwa ngokuphindaphindiweyo ukudala enye, ukuhlela iifayile zamagama ngaphandle kokwakha itemplate ukususela ekuqaleni.
Ukuyithumela, cofa ekunene kulwakhiwo kwaye ukhethe ukuba uprinte, gcina njenge-pdf ekhethiweyo okanye njengomfanekiso wesisombululo esiphakamileyo kwifomathi ye .ems. Inokuba kwifomathi yeai. YeAdobe Illustrator.
Ukuqukumbela, yomelele kwaye inomtsalane. Nangona kuthatha ixesha ukuqonda ukuqonda kwabo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini NgoNovemba, iziganeko ezibalulekileyo ze-3 kwi-geospatial field
Post Next I-Georeferencing yeepropati zasemaphandleniOkulandelayo »